စစ်ဦးစီးချုပ်အား ကိုမြအေးက အတိအလင်းမေးခွန်းထုတ် | MoeMaKa Burmese News & Media
“ကျွန်တော် ထောင်ကလွှတ်လာပြီးကတည်းက ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာ တစ်နှစ်ရှိပါပြီ ၊လက်ရှိ အခြေအနေမှာ ဘာမှအရာမထင်သေးတဲ့အပြင် ပိုပြီးဆိုးရွာလာတာတွေ တွေ့လာရတဲ့အခါမှာ လက်ရှိအစိုးရကိုမေးခွန်းထုတ်စရာ အများကြီး ရှိလာပါတယ် ၊ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နေသလားလို့ သံသယဖြစ်စရာတွေ ကျွန်တော်တို့ တွေ့လာရပါတယ် ၊ နောက်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို တိတိလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ် ၊ ဒီလိုစစ်တွေဖြစ်ပြီး ဖိအားပေးပြီးလုပ်နေတဲ့စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအာရပ် အစ္စရေးကို ပြန်ကြည့်ပါ ။အခုထိမပြီးဆုံးသေးပါဘူး ။ ဒီလိုအချင်းချင်း စခန်းတစ်ခုကို သိမ်းပြီးတော့မှအကယ်ဒမီဆုတွေယူဖို့ ပြိုင်နေမှာလား ဆိုတာကိုကျွန်တော် မေးချင်ပါတယ် ” ၄င်းကပြောကြားခဲ့သည် ။
ဒီဇင်ဘာလ(၂၃)ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှစတင်၍ တပ်မတော်မှ ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့် ထပ်မံဖြစ်ပွားနေသော အဆိုပါစစ်ပွဲတွင်တပ်မတော်ဘက်မှ ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းပါ အချက်အလက်များအရပြည်တွင်းစစ်တွင် အသုံးမပြုရန် တားမြစ်ထားသော စစ်ဂျက်လေယဉ်များ ၊ ၁၀၅မမ ၊ ၁၂၀မမကဲ့သို့သော အဖျက်စွမ်းအားမြင့် အမြောက်များနှင့် မူးဝေအော့အန်စေသော ဓါတုလက်နက်ဟုယူဆရသည့် ဓါတ်ငွေ့များကိုအသုံးပြုနေကြောင်း ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ယက်မှဒေါ်မေစံပယ်ဖြူ၏ပြောကြားချက်အရသိရသည် ။
မြန်မာ့ခေတ်မီဒီယာ မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
17 Responses to စစ်ဦးစီးချုပ်အား ကိုမြအေးက အတိအလင်းမေးခွန်းထုတ်
minko on December 31, 2012 at 12:03 pm
လူကြမ်းမင်းသား အကယ်ဒမီ ဆု ယူဘို့ လေ့ကျင့်နေတာပါကွာ- ဒို့ အဘို့ က ဒါ အသေးအမွှားပါ-ငှဲ -ငှဲ-ငှဲ-
ပုံ– ကာလုံ၏ ပြောခွင့်မရ-ပုဂ္ဂိုလ်-
ii on December 31, 2012 at 6:13 pm
လူကြမ်းမင်းသား အကယ်ဒမီ ဆု ယူဘို့ လေ့ကျင့်နေတာပါ
နိုင်ငံအချုပ် အချာပိုင် နယ်မြေထဲမှာ ခိုးဆိုး လုယက် လူသတ် မုဒိန်းကျင့် တံတား မိုင်းခွဲ ဆပ်ကြေးကောက် ပေါ်တာဆွဲ နေတဲ့ လူတွေကို နှိမ်နင်းတာ နယ်ချဲ့တာ တဲ့လား မျိုး ဖြုတ်ပစ်ကွာ
3.1.1959 on December 31, 2012 at 1:31 pm
chit chit on December 31, 2012 at 2:46 pm
Ko Mya Aye: ;;;;;;;;;; You are very very Smart. Good job.
Zaw Nyeiin Lat on December 31, 2012 at 2:00 pm
Ko Mya Aye,
I impress you very much and respect you too. There is no one who can dare ask the question to the military boss like you.
This is your best question and your best political record of your effort in politics.
Zaw Nyein Lat (74)
Kachin man on December 31, 2012 at 3:50 pm
thank you saya mya aye
myo thu on December 31, 2012 at 4:40 pm
Justic Myanmar on December 31, 2012 at 7:45 pm
ကလေးစစ်သားမရှိဘူး၊ (ILO မျက်ကန် နားပင်း)
နိုင်ရေးအကျဉ်းသားမရှိဘူး၊ (အာဏာလုမယ်ထင်တဲ့လူ အရေးယူထားတာပါ)
အဓမလုပ်အားပေးမရှိဘူး၊ (ILO ကိုမေးကြည့်)
ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုမရှိဘူး၊ (ဂေါ်ဇီလာသေကို ဂန်ဒူးစကပ်နဲ့ဖုန်း)
လှု့အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်တာမရှိဘူး။ (ဘယ်သူသေသေ ငါမသာမဖြစ်ရင်ပြီးရော)
ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရပါ၊ (သိပ်မရီနဲ့၊ ပြုံးယုံလေးပြုံးပါ)
ပြည်သူတွေအပြည့်အ၀ထောက်ခံအတည်ပြုထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးပါ၊ (?)
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာမရှိဘူး၊ (မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းတောင် မဖတ်ဘူးလို့၊သမိုင်းမှန်မသိလို့)
သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ရေးသားမှုများကိုဖေါ်ထုတ်အရေးယူနေပါတယ်။ (မမြင်ချင် မကြားချင်အဆုံး)
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ (နိုင်ငံတကာက Genocide တဲ့)
နိုင်ငံတကာစုံစမ်းအဖွဲ့ ခွင့်မပြုပါ၊ (ကိုယ်မှန်ရင်ဘယ်သူလာလာပေါ့)
OIC ကိုလက်မခံပါ (အလျှူငွေလာထား၊ ၀င်မစွက်နဲ့)
Ko Pauk on December 31, 2012 at 9:18 pm
ကိုနောက် on December 31, 2012 at 11:56 pm
lhdfy on January 5, 2013 at 7:54 pm
စစ်လေယာဉ်တွေလောက် ရောင်းလိုက်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။
nn2 on January 6, 2013 at 12:38 pm
ကိုနောက် on January 1, 2013 at 12:23 am
2013 နှစ်သစ်နှင့်အတူပေါ်ထွက်လာပါစေ။ 🙂
yinmin myat on January 1, 2013 at 8:12 pm
စစ်က ၂ ဖက်တိုက်ရတာ ဒါ ကြောင်. စစ်ဦးစီး ၂ယောက် တိုက်ခိုင်း ၂ယောက်စလုံး ဇိမ်ခံမနေစေနဲ့
Junwa on January 1, 2013 at 9:55 pm
ကိုမြအေးရဲ့ သမိုင်းဝင်မယ့် မေးခွန်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဘယ်သူမှမမေးရဲတဲ့မေးခွန်းပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမြအေး။
Sandar Tunaung on January 1, 2013 at 10:33 pm
၂၀၁၃ နှစ်သစ်နဲ့အတူပေါ်ထွက်လာရအောင် ခုစိုက်ခုထွက်တဲ့ ကောက်ရိုးမှိုလည်းမဟုတ်ဘူး
၂၀၁၂ ရဲ့ လက်ကျန် အသုံးမကျနိုင်ငံရေးသမားနဲ့ အသုံးမကျအစိုးရ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ပဲဆက်ပြီး ၂၀၁၃ ကို နှစ်ပါးသွားနေရအုံးမှာပဲ
Toe Aung on January 3, 2013 at 10:48 am
Dear U Mya Aye,
I proud of you, you did good job,good question,I feel very very sad.